Coronavirus: teratany frantsay iray maty afakomaly, 17 hafa mitondra ny tsimokaretina | NewsMada
Coronavirus: teratany frantsay iray maty afakomaly, 17 hafa mitondra ny tsimokaretina
Nahafaty olona iray indray ao Frantsa ilay aretina Covid-19. Ny nahataitra ny mponina any an-toerana, tsy niserana na kely akory aza, tany amin’ireo firenena na toerana ahitana ny aretina ity olona maty ity kanefa izao narary sy tonga amin’ny fahafatesana izao.
Namoy ny ainy vokatry ny nahazoany ilay tsimokaretina coronavirus, afakomaly alina tao amin’ny hopitaly iray ao Paris, ny teratany frantsay iray, mpampianatra, 60 taona. Fahafatesana faharoa nitranga tao Frantsa ity satria efa nisy teratany sinoa, 80 taona, maty koa tamin’ny fiandohan’ny fiparitahan’ny aretina.
Omaly koa, fantatra fa olona telo hafa ny mitondra ny tsimokaretina any an-toerana. Tsy nandalolalo tamin’ireo toerana mampiahiahy akory heverina fa mety hampiparitaka ny aretina avokoa ireo marary ireo. Frantsay iray ny efa tena marary mafy amin’izao fotoana izao.
Mahatratra 17 ireo nitondra ny aretina Covid-19 any Frantsa hatramin’ny fiantombohan’ny fiparitahan’ny aretina. Dimy tamin’ireo ny vao tranga vaovao niseho hatramin’ny talata teo. 11 amin’ireo nahitana tsimokaretina ireo kosa no efa navoaka ny hopitaly rehefa nahazo fitsaboana ka sitrana. Mbola misy efatra arahi-maso akaiky kosa ny fahasalamany any amin’ny hopitaly.
Marihina anefa fa ny alahady teo, nilaza ny minisitry ny Fahasalamana frantsay fa tsy ahitana intsony trangana Covid-19 ao an-toerana. Nivadika tampoka anefa izany tao anatin’ny 24 ora.
Fantatra ihany koa, omaly, araka ny fanambarana nataon’ny minisitry ny Fahasalamana any Alzeria fa misy ihany koa ny olona mararin’ity Covid-19 ity any an-toerana. Lehilahy, teratany italianina tonga tao Alzeria ny 17 febroary teo ity marary any an-toerana ity.
Firenena aty Afrika faharoa ahitana ny aretina Covid-19 i Alzeria taorian’i Egypta.
Any Italia kosa, mihanaka tanteraka ny aretina. Efa 300 mahery ireo olona mitondra ny aretina manaraka fitsaboana.
Manara-maso ny masoivoho eto Madagasikara
Araka ny fantatra kosa, manara-maso akaiky ny zava-misy ny masoivoho frantsay eto Madagasikara. Manohana ihany koa amin’ny fananan’i Madagasikara ny paikady fitiliana ny aretina amin’ireo foibem-pirenena manana fitaovana arifomba toy ny Institut Pasteur de Madagascar.
Nanamafy ny fanairana apetraka amin’ireo sehatra mpanara-maso miara-miasa amin’ny sampandraharahan’ny masoivoho sy ny IPM ihany koa izy ireo. Marihina hatrany fa hatry ny omaly, tsy mbola nahitana trangan’aretina Covid-19 eto Madagasikara.